सेक्युरिटी गार्डमा विदेश जान के गर्नु पर्छ ?
Thu, Oct 29, 2020 | 13:58:11 NST
प्रश्नः म २१ वर्षको भएँ । प्लस टु पास गरेको छु । म सेक्युरिटी गार्डमा विदेश जान चाहन्छु । तर सेक्युरिटीबारे केही जानकारी छैन् । म जान सक्छु कि सक्दिन ?
उत्तरः बलबहादुर तामाङ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - सेक्युरिटी गार्डमा जानको लागि पहिलो कुरा सेक्युरीटी गार्डको तालीम लिएको हुनु पर्‍यो। काम जानेको हुनु पर्‍यो। अंग्रेजी भाषा आउनु पर्‍यो। किनभने उता पिएसबिडी लिखित परिक्षा लिन्छ, काम गर्नको लागि परिक्षा पास गर्नै गर्छ। युएई सरकारले २,७५० दिहराम वेसिक तलब दिएको छ, तलबको लोभमा धेरै रकम तिरेर जाने अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा भइरहेको छ। सरकारले तोकेकै रकम तिरेर जानु होला। पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डमा जम्मा २० देखि २२ कम्पनीले मात्र पठाँउछ। ती कम्पनीहरुको बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट बुझ्न सकिन्छ।